Ihe nlere maka Arduino, IDE maka ndị ọrụ Arduino kachasị amalite | Akụrụngwa n'efu
Mmemme nke mbadamba mbadamba na-aghọ ihe ejiji na ihe ijuanya ebe ọ bụ na mbadamba dịka Raspberry Pi ma ọ bụ Arduino na-adịwanye ọnụ. Ihe nkuzi na nkuzi vidio dịkwa ọnụ ala ma ọ ga - ewe oge ole na ole iji mụta ihe mmemme mmemme. Ọ bụ n'ihi nke ahụ enwere ọtụtụ mmemme na-anwa inye aka ịmepụta mmemme ụfọdụ maka Arduino ma ọ bụ Raspberry Pi. Ọbụna mmemme etinyere n'ime ngwaọrụ ndị a iji mepụta mmemme ndị ọzọ, maka utu Pi anyị nwere ọtụtụ ihe atụ.
Otu mmemme ma ọ bụ sọftụwia ama ama na Arduino bụ Kọ maka Arduino, sọftụwia agbakwunyere ndị ọrụ novice nke ga - enyere anyị aka ịmepụta mmemme n'efu n'ihi na ọrụ Arduino anyị na-arụ ọrụ nke ọma.
1 Gịnị bụ ọkọ maka Arduino?
2 Etu esi wụnye ọkọ maka Arduino?
3 Kedu bọọdụ kwekọrọ na SfA?
4 Kọcha nke Arduino ma ọ bụ Arduino IDE?
Gịnị bụ ọkọ maka Arduino?
Mana nke mbụ anyị ga-ekwu na ọ bụ ọkọchị maka Arduino. Ihe ntanye maka Arduino bụ mmemme IDE nke emere maka ndị ọrụ novice. Ngwaọrụ maka Mmemme nke na-enyere ike ịmepụta koodu, mkpokọta ya na mmezu ya n'oge. Sọftụwia a dabere na ngwa ụmụaka ama ama akpọrọ ọkọ. Ngwa a na-enyocha nkuzi nke Mmemme n’etiti ụmụntakịrị ekele maka ngọngọ na mmemme mmemme nke na-enyere ụmụaka aka ịzụlite nka ha nwere ezi uche.. Echiche nke Scratch maka Arduino bụ iji mmemme mmemme na igbochi mmemme ka onye ọrụ ọ bụla, n'agbanyeghị ọkwa mmemme ha, nwere ike ịmepụta mmemme maka arduino.
Ọcha maka Arduino enweghị mmekọrịta ọbụla na Scratch ma ọ bụ na ọrụ Arduino, agbanyeghị, ebe ha bụ ọrụ n'efu, ewerela ihe kachasị mma nke ọrụ ọ bụla ka onye ọrụ ikpeazụ wee nwee ike iji bọọdụ Arduino na ngwanrọ ha Ọ bụ ezie na anyị ga-ekwu na ọrụ atọ a anaghị ekwurịta okwu. Nke ahụ bụ, ọkọ adịghị nhọrọ nke na-aghọ ọkọ maka Arduino ma ọ bụ na Arduino IDE na-ekwe ka mmemme mmemme na ngwa mgbakwunye akpọrọ ọkọ maka Arduino. Kọ bụ sọsọ sọftụwia na Ihe anakpo Arduino bu atumatu nnwere onwe nke otutu, dika Arduino IDE, nwere ndi na-anya ugbo ala nke Arduino maka nkwurita okwu..
N'ihi Community, ọkọ maka Arduino nwere ngwa maka gam akporo nke na - enyeghi ohere ka smartphone soro usoro a nwee nkwukọrịta mana anyị nwekwara ike nwalee ngwanrọ ekepụtara site na iji protocol HTTP.
Etu esi wụnye ọkọ maka Arduino?
Ihe ngbacha maka Arduino dị maka nyiwe dị iche iche, opekata mpe maka nyiwe kachasị ewu ewu nwere ọtụtụ ndị ọrụ: anyị nwere ike iwunye ya na Windows, na macOS, maka Gnu / Linux na ọbụla maka nkesa Pipe Pi, ya mere, anyị nwere ike ịnwe mmemme a na kọmputa ọ bụla anyị ji.
Mana nke mbụ, anyị ga-enweta mmemme iji wụnye ya na kọmputa anyị. Gbanye ukara website nke oru ngo anyị nwere ike ịnweta mmemme maka sistemụ arụmọrụ niile.
Ọ bụrụ na anyị na-eji Windows, anyị ga-okpukpu abụọ pịa na ebudatara ngwugwu na soro ntuziaka nwụnye nke anyị ga-aga n'ihu pịa bọtịnụ "ọzọ" ma ọ bụ "ọzọ".
Ọ bụrụ na ị jiri macOS, usoro ahụ yiri ma ọ bụ yiri. Mana tupu ịpị ngwugwu abụọ ebudatara, anyị ga-aga na nhazi MacOS ma hụ na sistemụ arụmọrụ na-enye ohere ntinye nke mmemme na enweghị ikikere. Ozugbo anyị mechara nke a, anyị na-emeghe ngwa ngwugwu ma dọrọ ngwa na folda ngwa ahụ.
Ọ bụrụ na anyị jiri Gnu / Linux, mgbe ahụ anyị ga-eji mbụ budata ngwugwu kwekọrọ na nyiwe anyịN'okwu a, ọ gaghị abụ maka nyiwe 64-bit ma ọ bụ 32-bit kama ọ bụrụ na nkesa anyị na-eji ngwungwu debian ma ọ bụ ngwugwu Fedora, ya bụ, ụgwọ ma ọ bụ rpm. Ozugbo anyị ebudatara ngwugwu nke kwekọrọ na nkesa anyị, anyị ga-emepe ọnụ na folda ahụ, nke a na-eme site na ịpị aka nri na oghere folda ahụ ma mee ihe ndị a na njedebe:
Ma ọ bụ, anyị nwekwara ike ịwụnye ya site na iji kọmputa ede ihe ndị a:
Mgbe sekọnd ole na ole wụnye usoro ihe omume, anyị ga-enwe akara ngosi na anyị menu na a ga-akpọ ọkọ maka Arduino. Dịka ị pụrụ ịhụ, ntinye nke IDE a na-ahụ anya dị mfe ma n'ozuzu ya achọghị mmemme mpụga ọ bụla iji rụọ ọrụ nke ọma.
Kedu bọọdụ kwekọrọ na SfA?
O di nwute ọbụghị bọọdụ Arduino niile ka dakọtara na Scratch maka Arduino. Maka oge ahụ ha na-dakọtara naanị Arduino UNO, Arduino Diecimila na Arduino Duemilanove. Mpempe akwụkwọ ndị ọzọ adabaghị na mmemme ahụ mana ọ pụtaghị na ha enweghị ike ịme koodu ahụ anyị mepụtara, ya bụ, koodu anyị mepụtara nwere ike ibupụ ya na IDE ọzọ ka e wee chịkọta ya ma mee ya. Dị ka ọkọ, SfA nwere ike izipu koodu na IDE dị ka Arduino IDE wee ziga mmemme ahụ na bọọdụ ndị ọzọ nke Project dabara na Arduino IDE nakwa na ha nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na-enweghị ịdabere na mbupu ahụ gafee Scratch maka Arduino.
Banyere koodu ahụ, ọ dị nwute maka mbipụta ikikere, faịlụ ndị ahụ abụghị ntụziaka niile, ya bụ, Scratch files ghọtara site na Scratch maka Arduino mana ndị mmemme a adabaghị na ọkọ. Ọbụlagodi na koodu nke mmemme abuo a mebere ya na Arduino IDE. Nsogbu a bụ ihe ga-apụ n'anya na oge na onyinye nke Community, mana n'oge a enweghị ike ịme ya.
Kọcha nke Arduino ma ọ bụ Arduino IDE?
N'oge a, ị ga-eche n'ezie ihe ka mma maka mmemme maka Arduino Kọcha nke Arduino ma ọ bụ Arduino IDE? Ajuju siri ike nke nwere obere azịza ga-aza ma ọ bụrụ na anyị maara n'ezie ọkwa ọkwa mmemme anyị. Ọcha maka Arduino bụ IDE nke ezubere maka ndị ọkachamara kachasị obere na ndị ọrụ pere mpe nke na-enyere aka site na akụkụ a na-ahụ anya maka mmemme ngọngọ, ihe yiri nke a na-akpọ ọkara mmemme. Ọ bụ ezie na Arduino IDE bụ IDE maka ọkachamara na ndị na-eme ihe nrịgo nke etiti na-achọghị akụkụ anya iji mee mmemme. Na ọ bụrụ na mmemme ahụ bụ maka nwatakịrị ma ọ bụ onye nọ n'afọ iri na ụma, o doro anya na Scratch maka Arduino bụ mmemme kwesịrị ekwesị.
Ma, ọ bụrụ na anyị nwere otu ìgwè dị ike, desktọpụ desktọọpụ ga-ezu, ọ kachasị mma ịnwe ma ngwọta. Dị ka anyị kwurula na mbụ, Scratch maka Arduino nwere ike inyere anyị aka site na imepụta blọlụ na Arduino IDE nwere ike inyere anyị aka iziga mmemme ahụ na bọọdụ dị iche iche, sitere na Arduino ma ọ bụ site na ọrụ ndị ọzọ na Arduino IDE Mana, otu osila dị, nhọrọ ahụ bụ nke gị Kedu nke ị họọrọ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Arduino » Ihe nlere maka Arduino, IDE maka ndị ọrụ Arduino kachasị novice